Taj Mahal, A Symbol of Love | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on November 2, 2017 by Nu Myat
အချစ်အလွမ်းတို့ ထုံမွှမ်းရာ အိန္ဒိယမှ Taj Mahal
ခရီးသွားဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျှောက် ကမ္ဘာပေါ်က ထင်ရှားတဲ့ အဆောက်အအုံအတော်များများဆီ ကျွန်မရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အိန္ဒိယက ကမ္ဘာကျော်တက်(ဂ်ျ)မဟာ (Taj Mahal) အဆောက်အအုံကြီးကတော့ အင်မတန်ထူးခြားလှပပြီး ကျွန်မရဲ့ စိတ်နှလုံးကိုပါဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တက်(ဂ်ျ)မဟာက အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ဘက်ရှိ အာဂရာ(Agra) မြို့ ယမုံနာမြစ်ကမ်းဘေးမှာတည်ရှိပြီး အိန္ဒိယမှာသာမက ကမ္ဘာမှာပါ ထင်ရှားတဲ့ ဂူဗိမာန်ကြီးပါ။
သူ့ရဲ့ အဓိကထူးခြားချက်က အချစ်အလွမ်းတွေနဲ့ ထုံမွမ်းထားတဲ့ အချစ်သင်္ကေတအဆောက်အအုံကြီး ဖြစ်လို့နေတာပါ။ မဂို(လ်)ဧကရာဇ် ရှာဂျဟန်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ချစ်လှစွာသော မိဖုရား မွမ်တက်(ဇ်)မဟာ ကို ရည်စူးပြီး လှပတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ ဘုရင်ကြီးမှာ မိဖုရားအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှ တတိယမြောက်မိဖုရားကြီးက သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးဖြစ်သလို အချစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ၁၉နှစ်ကြာ ပေါင်းဖက်ခဲ့ရပြီး သားတော်သမီးတော်ပေါင်း ၁၄ဦး မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အသက်၃၉နှစ်အရွယ်မှာ နောက်ဆုံးရင်သွေးမွေးဖွားပြီး မီးတွင်းမှာကွယ်လွန်သွားတာကြောင့် သေကွဲကွဲခဲ့ရပါတယ်။ ကာလရှည်ကြာစွာချစ်ခဲ့ရတဲ့ မိဖုရားကြီး ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်မှုက ဘုရင်ကြီးအတွက် ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး မိဖုရားကြီး အလွမ်းပြေအဖြစ် ဂူဗိမာန်ဆောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကာ ကွယ်လွန်ပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
အလွမ်းတွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့လို့လားတော့ မသိဘူး။ အဆောက်အအုံကြီးက သိပ်ကိုလှပါတယ်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ အဆောက်အအုံရဲ့ အဓိကအသက်က ခလယ်မှာ ထီးထီးကြီးရှိနေတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဥလို ထိပ်ချွန်ချွန်အမိုးခုံးအဆောက်အအုံကြီးပါ။ အခုံးရဲ့အမြင့်ပေကတင် ၁၁၅ပေရှိပြီး ထောင့်လေးထောင့်မှာ အမိုးခုံး၎ခုက ၀န်းရံထားပါတယ်။ အဆောက်အအုံအပြင်ဘက်ထောင့်လေးထောင့်မှာလည်း တိုင်လေးတိုင်ဆိုက်ထူထားခြင်းက အဆောက်အအုံကြီးကို ပိုလို့ကြွနေစေပါတယ်။ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အမြင့်ပေကတော့ ၅၆၁ပေပါ။ မျှော်စင်လေးတိုင်ကို အပြင်ဘက်အနည်းငယ်စောင်းပြီး ဆောက်ထားတာက်ိုတွေ့ရမှာပါ။ ငလျင်ဒဏ်ခံရပါက ခလယ်က ဂူဗိမာန်ကြီးထံ ပျိုမကျအောင် တမင်အပြင်ဘက်စောင်းပေးထားတာပါ။ ၀င်းထဲမှာ ဥယျာဉ်ကျယ်ကြီး၊ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အရိပ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ ရေကန်ကြီး၊ ပလီနဲ့ အခြား ဂူဗိမာန်တွေလည်းရှိလို့နေပါတယ်။
တက်(ဂ်ျ)မဟာရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်နောက်တစ်ချက်က ဂူဗိမာန်ကြီးကို အချိန်ရယ်၊ အလင်းရောင်ရယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ မြင်တွေ့နိုင်တာပါ။ မနက်စောစော အာရုဏ်တက်စမှာ ပန်းသွေးရောင်သန်းကာ ညနေစောင်းမှာ ဖွေးဖွေးဖြူနေတတ်ပြီး ညဘက်လရောင်အောက်မှာတော့ ရွှေရောင်ဝင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဂူဗိမာန်ကြီး အရောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုက အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ စိတ်အထွေထွေကို ထင်ဟပ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တက်(ဂ်ျ)မဟာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က နန်းတော်တို့ရဲ့ သရဖူလို့ သိရပါတယ်။ မဂို(လ်)တို့ရဲ့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော အင်ပါယာကိုထင်ဟပ်စေခဲ့တဲ့ သာဓကအဖြစ် အစ္စလာ(မ်)၊ ပါရှန်၊ အိန္ဒိယနဲ့ တူရကီ အော်တမာန် ဗိသုကာလက်ရာတွေ ပေါင်းစပ်လွှမ်းခြုံထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂူဗိမာန်ကြီးကို ၁၆၃၂ခုနှစ်ကစတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၆၅၂ခုနှစ်မှ အပြီး သတ်နိုင်ခဲ့တော့ အနှစ် ၂၀ကြာအောင် တည်ဆောက်ခဲ့ရတာပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားပေါင်း ၂၂၀၀၀ ကျော်နဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်ဖို့ ဆင်အစီးရေ ၁၀၀၀ တို့ကို အသုံးပြုခဲ့ရတယ်။
ဘုရင်ကြီးက ယမုံနာမြစ်တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ တက်(ဂ်ျ)မဟာအဆောက်အအုံနဲ့ ပုံစံတူ အနက်ရောင်ဂူဗိမာန်ကို သူကိုယ်တိုင်အတွက် တည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ သားတော်တွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီး မဆောက်ဖြစ်လိုက်ရပါဘူး။ ဘုရင်ကြီးဟာ သူကဘ၀ရဲ့နေ၀င်ချိန်မတိုင်မီ နောက်ဆုံး၉နှစ်တာကာလမှာ သူသိပ်မြတ်နိုးရတဲ့ တက်(ဂ်ျ)မဟာကြီးထဲ ၀င်ခွင့်မရခဲ့တာလည်း ရင်နင့်စရာပါ။ ဘုရင်ကြီး နာမကျန်းဖြစ်ချိန်မှာ သားတော်အချင်းချင်းနန်းလုပွဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘုရင်ကြီး ပြန်ကျန်းမာလာပေမဲ့ အခါနှောင်းသွားပါပြီ။ သားတော်နှစ်ပါး ရန်ပွဲမှာ သားတော်တစ်ပါးနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပေမဲ့ ထိုသားတော်ကျရှုံးပြီး သူကိုယ်တိုင်ပါ ထောင်နန်းစံခဲ့ရတာကြောင့်ပါ။
အိန္ဒိယရဲ့ အထင်ကရအဆောက်အအုံဖြစ်သလို လက်ရာမြောက်ဗိသုကာလက်ရာတွေကလည်း ဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းတာကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခရီးသွားများစွာလာရောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ နေ့စဉ်လာရောက်တဲ့ ဧည့်သည်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရယ် ဗိသုကာလက်ရာမြောက်မှုရယ်ကြောင့် ၂၀၀၇ခုနှစ်ကအသစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် (၇)ခုစာရင်းထဲပါလည်း ပါရှိလျှက်ရှိပါတယ်။
This entry was posted in Asia, Heritage, Travel, Uncategorized and tagged Asia, Travel. Bookmark the permalink.
← Borobudur , World Largest Buddhist Temple
Venice, Floating City →